List of best photographers in Zimbabwe. 2018 year #35AWARDS
Benevolent Masora, Zimbabwe, Harare
Haka Game Park, Zimbabwe
This was taken on a game reserve near Harare, Zimbabwe. It is currently winter in Zimbabwe so the bush is dry with not much green. I was lucky on this day as it was cloudy which helps with the light :)
Mike Wall, Zimbabwe, Harare
A picture tells its own story.
Tapiwa Chitaukire, Zimbabwe, Harare